Double rusvingo mukombe
Plastic chingwa bhegi
Coffee Cup wokuisira
Coffee Cup muvharo
Greenfoodpack Co. ari nyanzvi Chinese akaigadzira kavha zvinhu Mabheka, hotel, zvihwitsi zvitoro uye dzakagadzirirwa zvitoro zvakafanana. We kuzvikudza pachedu mukupa dzakasiyana-siyana Eco- noushamwari zvinogadzirwa kuti havasi akanaka chete, asi nyore kushandisa.
Kuvaka muchiso wako, customized ODM basa inowanika sezvo paminiti vamakananga musika, pamwe kusanduka MOQ muedzo kuti pamusoro zvinhu zvizhinji. Zvino Greenfoodpack chakabatsira Mabheka, hotera nezvimwe mabhizimisi zvokudya basa kuti vabudirire yepamusoro varikumahombekombe. Nokuti nguva dzose, zvose mazororo, nguva dzose. Quality, magadzirirwo uye basa akaisa Greenfoodpack mberi musango.
Somunhu kambani mutengi vaifarira, Greenfoodpack anoedza kuva mutungamiri kavha indasitiri. We vanozviitira kubudirira kwako nokupa nzira yakanakisisa uye kupa chemhando yepamusoro kavha pamwe dzakazvitsaurira vatengi.
Cake Pop Boxes, Plastic chingwa Bags , Printed Carrier Bags , Paper Cup, Kraft Paper Straws, Hot Cold Cups,